कमाइ नायक–नायिकाको - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
कसैको व्यक्तिगत आम्दानी वार्षिक ३ लाखभन्दा माथि छ भने उसले राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ । त्योभन्दा बढी भए पहिलो १ लाखको १५ प्रतिशत र त्योभन्दा पनि माथिको कमाइको २५ प्रतिशतका आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कसैले वार्षिक २० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्छ भने उसले मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ अर्थात् प्यान नम्बर लिएर निरन्तर कर बुझाएको हुनुपर्छ । सरसर्ती हेर्दा नेपाली चलचित्रका एक दर्जनभन्दा बढी कलाकार करको दायरामा आउँछन् ।
नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई भन्छन्– ‘नेपाली चलचित्र चलेर राम्रो आम्दानी हुने बाटोमा अघि बढ्दैछ । दुई–चार जनाले नियमित कर बुझाइरहेका पनि छन् । कसले बुझायो वा बुझाएन भन्ने कुराको अनुगमन कर कार्यालयले गर्नुपर्छ र चलचित्र बिकास बोर्ड कर कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार छ ।’ एक निर्माताले नाम नछाप्ने शर्तमा भने– ‘यहाँ केही कलाकारले पाउने पारिश्रमिक धेरै हुन्छ, तर अनुबन्धपत्रमा कम लेखिन्छ । आन्तरिक सहमतिमा कागज गरेर चलचित्रमा काम गर्ने–गराउने क्रम बढ्दो छ ।’ बोर्डका अध्यक्ष राई त कलाकारहरूले विदेशमा हुने कार्यक्रमबाट कमाएर ल्याएको पारिश्रमिकको पनि कर बुझाउनुपर्छ भन्छन् । उनीले आम्दानीको स्रोत स्पष्ट नभए कमाएको रकम स्वत: ‘ब्ल्याक मनी’ हुनसक्ने चेतावनी पनि दिन्छन् तर यहाँ कर छल्ने र आम्दानी लुकाउनेहरूको छानबिन कसले गर्ने ?
केही समयअघि एक नवप्रवेशी कलाकारले एक चलचित्रका लागि ५ लाख पारिश्रमिक मागेको कुरा केही अनलाइन मिडियामा आएको थियो । जबकी ती कलाकारले आफ्नो नामको भरमा त्यो मितिसम्म कुनै चलचित्रलाई व्यवसायिक फाइदा दिएका थिएनन् । पारिश्रमिक माग्नु कलाकारको हक हो, र उसले भनेको जति दिनु वा नदिनु निर्माताको निर्णय । एउटा चलचित्र सुपरहिट हुँदा वा मनग्गे कमाउँदा पनि निर्माताको हातमा कुल कमाइको धेरैमा पचास प्रतिशत पर्छ । निर्माता तथा वितरक प्रदीपकुमार उदयका अनुसार प्रवेश टिकटको मूल्यमा सरकारले तोकेको कर काटेपछि बच्ने रकमको ५० प्रतिशत निर्माताले प्राप्त गर्छन् ।
सिंगल थियटरमा चलचित्र नउत्रेसम्म ५० प्रतिशत र मल्टिप्लेक्समा पहिलो साता मात्र ५० प्रतिशत र त्यसपछि हप्तैपिच्छे ४२, ३७, ३० हुँदै प्रतिशत घट्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा चलचित्र चलेन भने निर्माता स्वत: घाटामा हुन्छ । नेपालमा अहिले सयवटा पनि सिनेमाघर छैनन् । विदेशमा चिठ्ठा परे जसरी आक्कल–झुक्कल चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइने अवस्था छ । निर्माताले आफ्नो ५० लाखभन्दा बढी रकमको जुवा खेलिरहेको जस्तो चलचित्र निर्माणको अवस्थामा नायकले ५ लाख, नायिकाले ४ लाख र अरू कलाकारलाई गरेर १५ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक बुझाउनु परेपछि निर्मातालाई वास्तवमै अप्ठेरो हुन्छ । यद्यपि चलचित्रमा लगानी गर्छु भनेर आएका निर्माताले नाम कहलिएका कलाकारलाई उनीहरूले माग गरेबमोजिम रकम त दिनैपर्छ, अन्यथा अर्को कलाकार खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।
गफको पछाडि नदौडौं
फलानो कलाकारले २० लाख लियो, फलानोले १० लाख लियो भनेर केही मिडियामा आउने खबरबाट कलाकारहरूको पारिश्रमिक आँकलन हुन सक्दैन भन्छन्, निर्माता माधव वाग्ले । अर्का निर्माता तथा वितरक प्रदीपकुमार उदय भन्छन्, ‘मिडियाले चलाएको हल्लाको भरमा कलाकारहरूको रेट (पारिश्रमिक) तोकिएको छ, जुन एकदमै गलत हो ।’ माधव वाग्लेका अनुसार जसले जतिसुकै भने पनि कसैले पनि ५–६ लाखभन्दा बढी पाएका छैनन् । उनका अनुसार यति लिएँ, उति दिएँ भनेर मौखिक रूपमा जसले जति भनिदिए पनि भयो । प्रदीपकुमार उदय सोध्छन्–‘मिडियामा आएको हल्लालाई मान्ने कि कलाकारहरूले पाउने पारिश्रमिकको वास्तविकतालाई ? त्यसैले गफ र हल्लाको पछाडि नदौडौं ।’
पारिश्रमिकमा ठगिएका पनि छन्
‘एउटा चलचित्रमा काम गरेँ, चलचित्र निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म किस्ता–किस्ता गरेर आधा पारिश्रमिक मात्र पाएँ । आधा पारिश्रमिक पाउनै बाँकी थियो । चलचित्र प्रदर्शन भयो र नराम्रोसँग डुब्यो । त्यसपछि निर्माता सम्पर्कबाट टाढा भए । मैले पनि विचरा डुबेको निर्मातासँग के किचकिच गर्नु भनेर बाँकी पारिश्रमिक माया मारिदिएँ ।’ यो भनाइ हो नायिका अशिष्मा नकर्मीको । पारिश्रमिकको कुरामा निर्माणपक्षले कबुले जतिको रकम नदिए पनि एकताका चलचित्र निर्माता संघमा उजुरी निकै पुग्थे र त्यसमा विवाद पनि हुन्थ्यो । एक पीडित कलाकार भन्छन्– ‘नाम कहलिएका कलाकारहरूले त जसरी पनि अनुबन्धपत्रमा सहमति भएअनुसारको पारिश्रमिक उठाउँछन्, तर हामी जस्ता सहकलाकारहरूलाई जसले पनि हेप्छन् । पारिश्रमिक नै नदिई काम गराउँछन् ।’